Inhlekelele yaseLife Esidimeni sekuyibhola lepolitiki ku-EFF, kusho i-ANC | News24
Inhlekelele yaseLife Esidimeni sekuyibhola lepolitiki ku-EFF, kusho i-ANC
Johannesburg – Inhlekelele yokushona kweziguli ezilinganiselwa ku-100 eziphazamiseke ngokwengqondo akufanele isetshenziswe njengebhola lepolitiki, kusho okhulumela i-ANC eGauteng, uMotalatale Modiba, ngoMsombuluko.
UModiba ubekhuluma mayelana nesiphakamiso se-EFF sokungamethembi uNdunankulu waseGauteng, uDavid Makhura.
Lesi siphakamiso kulindeleke ukuthi kuphikiswane ngaso ekuhlaleni kwesiShayamthetho kwesithathu ngoLwesibili.
UModiba uthi i-ANC esifundazweni iyabuthemba ubuholi bukaMakhura futhi igculisekile ngendlela asingathe ngayo lolu daba.
“Imindeni ekhahlamezekile isivele icacisile ukuthi lesi sigameko senhlekelele akufanele sibe yibhola lezepolitiki njengoba lokhu kwandisa ubuhlungu,” kusho uModiba.
Okhulumela uMakhura, uPhumla Sekhonyane, naye uhambe emagameni kaModiba, wathi imidlalo yezepolitiki angeke ize ibaphazamise “ekusebenzeni ngokungakhathali nemindeni ekhahlamezekile”.
Ngaphambilini umholi we-EFF esifundazweni wathi i-EFF yenza isiphakamiso sokungamethembi uMakhura ngemuva kokumvulela icala ngaphambilini kule nyanga.
Uthi uNdunankulu akakwazi ukuqhubeka nokusebenza ehola imali yabakhokhi bentela ekubeni esolwa ngokubulala abantu, wathi futhi uMakhura akakwazi ukubalekela ukubhekana nemiphumela yokushona kwalezi ziguli.